यौ'नचा'हना सञ्चालनमा विभिन्न प्रणाली सक्रिय देखिन्छन् । एक त अन्त:श्रावी गन्थ्रिको प्रणाली इन्डो'क्राइन सिस्टमअन्तर्गतका रागरसहरूले सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् भने अर्कातिर इन्द्रिय प्रणालीका साथमा स्नायुप्रणाली । यसमा मस्ति'ष्कको विशेष भूमिका हुन्छ, किनकि अनेक यौ'न सन्देशलाई यस मस्ति'ष्कले.....
एजेन्सी । 'से'क्सका बारेमा महिला पुरुष दुबै धेरैभन्दा धेरै कुराहरु जान्न चाहान्छन् । तर उनीहरु कुरा गर्न लजाउँछन् । सुखद दापत्य जीवनको कल्पना गर्न चाहानुहुन्छ भने र परिवारमा आपसी सझदारी बढाउन चाहानुहुन्छ भने यस्ता कुराहरु श्रीमान र श्रीमतीबिच हुनुपर्छ । पुरुषले महिला र महिलाले एक अर्कालाई कसरी सु'खानुभुत.....
यौ'न मानिसका लागि आधारभूत आवश्यक्ता हो । तर, हाम्रो सामाजमा यौ'न जीवनलाई खुल्ला राखिएको छैन । यही अवस्थामा मानव जीवनको अनिवार्य आवश्यक्ताको रुपमा रहेको यौ'न जीवनलाई सहज र सफल कसरी बनाउने भन्ने कुरा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ । यी १० उपाय जस्ले यौ'न जिवनलाई सफल बनाउँछ –स'म्भोगका बेला जोडीको मूडलाई ध्यानमा राख्नुहोस्.....
यौ'न सम्ब'न्ध पुरुष र महिलाबीचको प्राकृतिक आकर्षणको मुख्य कारण हो । प्रायः महिलाहरू आफ्नो पार्टनरसँग मात्र यौ'नस'म्पर्क राख्न रुचाउँछन् । यौ'न स'म्बन्धले महिला र पुरुषविचको सम्बन्धलाई पनि मजबुत बनाउँछ भनिन्छ, तर कतिपयको भने यौ'नस'म्पर्क पछिको सम्बन्धमा विचलन भएको पनि पाइन्छ । यौ'नस'म्पर्कपछि महिलाहरूले.....
खिम लामिछाने काजी सूचना तथा प्रविधिको विकाससँगै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रोगको निधान र पहिचानको लागि नयाँ नयाँ वैज्ञानिक प्रविधियुक्त मेसिन र औजारहरुको आविष्कार भइसकेको छ। यध्यपि बदलिँदो रहनसहन, आनिबानी र आहारबिहारको कारण नयाँनयाँ रोगहरुको उत्पत्ति दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको पाइन्छ। असामान्य प्रकृतिका.....
मानिसहरू धेरै भन्दा धेरै यौ'न स'न्तुष्टि कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने कुराको चासो राख्ने गर्छन्। कतिले त यौ'न स'न्तुष्टि पाउने नाममा लिं'गको आ'कार बढाउनुपर्छ भन्ने ठान्छन्। यौ'न स्वा'स्थ्यसम्बन्धी विज्ञा'पनको आधारमा लिं'गको आ'कार बढाउन औष'धि समेत प्रयोग गर्छन्। यौ'नविद् रुसेल आइसम्यान्सले १८ देखि २५ वर्षका महिलाहरूमा.....
महिलाले एक्लै यौ’न स’न्तुष्टि लिने २ उपाय !
दुई व्यक्तिबीच शारी'रिक स'म्पर्क गरेर यौ'न स'न्तुष्टि लिने प्र'क्रिया सबैभन्दा सहज प्रक्रिया हो तर सधैँ यो सम्भव हुन्न । विवाह पछिको अवस्थामा समेत श्रीमान्–श्रीमती सधैँ सँगै नहुन सक्छन् । हाम्रो समाजमा विवाहअगाडि शारी'रिक स'म्पर्कको माध्यमबाट यौ'न सन्तु'ष्टि लिनु सामाजिक रुपमा समेत जटिल छ । अझै पनि हाम्रो.....
महि’नावारी ढिलो हुन्छ ? चाँडो गराउन यी ६ चिज खानुहोस् !
महि'नावारी ढिलो हुने गरेको छ अथवा कुनै कामविशेषले गर्दा निर्धारित मितिभन्दा चाँडै म'हिनावारी होस् भन्ने चाहनुभएको छ भने केहि खानपानमा सुधार गरेमा समस्याको समाधान गर्न् सकिन्छ । महि'नावारी चाँडो गराउन यी ६ खानेकुरा खानुहोस् फलफूल र तरकारी क्यारोटिनको मात्रा उच्च भएका फलफूल खाने गर्नाले महि'नावारी.....
मानिसहरु युवा देखिनकै लागि बुढेशकालमा समेत धेरै मेहनत गर्ने गर्छन् । तर, व्यवस्थित जीवनशैलीले मानिसलाई बुढेशकालमा समेत तन्नेरी देखाउन मद्दत गर्छ । मानिसको आयुसँगै मानिसको छालाले बुढ्यौलीको संकेत दिने गर्छ । तर, त्यसबाट बच्नको लागि कस्तो उपाय अपनाउन सकिन्छ ? यौ'न स'म्बन्ध धेरै यौ'नसम्प'र्कले पनि मानिसको.....